Isi-AlbaniaIsi-Amharic saseIsi-ArmenianIsi-AssameseIsi-Azeri (EsiyisiLatini)IsiBasqueIsiBengali (isiNdiya)IsiBengali (saseBangladesh)IsiBhunu IsiBosnia (esiyisiCyrillic)	IsiBosnia (EsiyisiLatini)IsiCatalaIsiFilipinoisiGaliciaIsiGeorgiaIsiGujaratiIsiHausaIsiHindiIsi-IcelandIsi-IgboIsi-IndonesiaIsi-Inuktitut (EsiyisiLatini)IsiKannadaIsiKazakhIsiKhmerIsiKonkaniIsiKyrgyzIsiLaoIsiLuxembourgIsiMacedonia (saseMakhedoniya endala)IsiMalay (saseBrunei Darussalam)IsiMalay (saseMalesia)IsiMalayalamisiMaltaIsiMāoriIsiMarathiIsiNepalIsiNorway (esiyisiNynrsk)Isi-OriyaIsiPediIsiPersiaIsiPunjabiIsiQuechua (sasePeru)IsiSerbia (esiyisiCyril)IsiSinhalaIsiSwahiliIsiTamilIsiTatarIsiTeluguIsiTswana (saseNingizimu Afrika)isi-UrduIsi-Uzbek (EsiyisiLatini)IsiVietnamIsiWelshIsiXhosaIsiYorubhaIsiZulu
I-Windows Vista Language Interface Pack (LIP) ihlinzeka nge-User Interface evunyelaniswe nendawo ngokwengxenye yezindawo i-Windows Vista evame ukusetshenziswa kabanzi kuzo
I-Windows Vista Language Interface Pack (LIP) ye-Windows Vista ihlinzeka ngohlelo oluhunyushwe ngokwengxenye lwe-Windows esetshenziswa kabanzi. Ngemva kokufaka i-LIP, umbhalo okumawizadi, amabhokisi edayalogi, amamenu, izihloko zoSizo nokuXhaswa, kanye nezinye izinto kwi-interface yomsebenzisi kuzoboniswa ngolimi lwe-LIP. Umbhalo ongahunyushwanga uzoba ngolimi oluyisisekelo lwe-Windows Vista. Ngokwesibonelo, uma uthenge uhlelo lweSipanishi lwe-Windows Vista, wase ufaka i-Catalan LIP, eminye imibhalo izahlala iyiSipanishi. Ungafaka ama-LIP angaphezu kweyodwa, ngakho umsebenzisi ngamunye wekhompyutha angabonisa i-user interface ngolimi aluthandayo.
• I-User interface ngolimi (izilimi) ezilandelayo: IsiNgisi
• 4.63 Mb esikhala esikhala esingenalutho sokulandwa
• 15 Mb esikhala esingenalutho sokuhlelwa
Amapulatifomu Asekelwayo: Ama-LIPS asebenza kuphela ngezinhlelo ze-32-bit ze-Windows Vista futhi awanakufakwa ezinhlelweni zangesikhathi esidlule ze-Windows noma ezinhlelweni ezingama-64-bit ze-Windows Vista.
Chofoza inkinobho Yokulanda kuleli khasi ukuze uqalise ukulanda, noma ukhethe ulimi oluhlukile ohlwini olubheke ezansi bese uchofoza Hamba.
Yenza okunye kwalokhu okulandelayo:
Ukuze uqale ukufaka uhlelo ngokushesha, chofoza u-Vula noma u-Vula lolu hlelo endaweni olukuyo njengamanje.
Ukuze ukopishe ukulanda ekhompyutheni yakho ukuze ufake uhlelo ngesinye isikhathi, chofoza u-Gcina noma u-Gcina lolu hlelo kwidiski.
Windows Phone 7 Connector (for Mac) Beta - IsiZulu